Prof. Saalim Caliyow oo Jowhar u yimid inuu ka furo Bangiga Dhexe
Prof. Saalim Caliyow Ibrow ayaa soo gaarey magaalada Jowhar, isaga oo safarkiisa ay ku wehliyeen Prof. Cabdullahi Sheekh Ismaciil. Safarkan oo ah kii ugu horeeyey oo ay labadaas masuul ku yimaadan degmada Jowhar oo xaruun u ah garabkooda siyaasadeed.
Mar uu la hadlayey siyaasiyiinta garabka Jowhar ku sugan ayaa wuxuu sheegay in xiriiro maaliyadeed uu ka helay wadamo badan iyo hay'ado sida Bangiga Islaamka, Bangiga Aduunka iyo Bankiga Horumarinta Afrika.
Prof. Saalim Caliyow Ibrow wuxuu kaloo sheegay in Bangiga Dhexe ee Somaliya xaruuntiisa laga furi doono magaalada Jowhar, isagoo tilmaamay in Garabkooda Jowhar ay heleen sooryo badan, waxa uuna sheegay in mushaaraaka la siin doono dhamaan xubnahooda jooga Jowhar.
Ilo ku dhow xogta Prof. Saalim ayaa waxey xaqiijinayaan in uu magaalada Jowhar keenay lacag yar oo ay ugu deeqday dowlada Sacuudiga oo ah Fidro iyo sadaqo loogu tala galay masaakiinta Soomaaliyeed.
Jowhar ayaa hadda waxaa ku dhan garabka Cabdullahi Yusuf waxaana wadatashi aan kala joogsi lahayn loogu jiraa sidii loo qeybsan lahaa lacgataas oo ah midi ugu horeysey ee soo gaartey garabka Jowhar. Waxey doodi ka taagan tahay in lacgtaas yartaa ay qeybsadaan madaxda waaweyn ee garabkaas kuwaas oo qarashyo badan ka isticmaalay jeebkooda iyo in wax xoogaaya laga siiyo qeyb ka mid ah lacagtaas xildhibaanada soo raacay garabkaas, kuwaas oo ku silicsan Jowhar dhaqaale la’aan awgeed.
Waxaa sidoo kale la soo hadal qaaday in xaruunta Jowhar laga furo Bangiga Dhexe, laguna aamino qasnada iyo keydka bangigaas nin ka soo jeeda Bari oo lagu magacaabay Bashiir Ciise, kaas oo horay u ahaan jirey madaxa Bangigii Keydka iyo Ganacsiga ee xaruuntiisu ahayd Muqdisho.